ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းထုတ် ပေါင်းသတ်ဆေး (၁၀) မျိုး - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းထုတ် ပေါင်းသတ်ဆေး (၁၀) မျိုး
13 Aug 2019 12:46 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
527 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
သေသေချာချာပေါင်းနှုတ်ရိတ်သင်ထားတဲ့ မြက်ခင်းလေးနဲ့ ပန်းခြံလေးကိုရရှိနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြေရှင်းနေရတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း လူတွေဟာသူတို့ရဲ့မြက်ခင်းပြင်လေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ နှစ်စဉ်ပေါင်းသတ်သမားတွေငှားရမ်းခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းတွေမှာ သန်းပေါင်းများစွာထိကုန်ကျပါတယ်။
ဒီအသုံးမတည့်တဲ့ အပင်တွေဟာ နွေရာသီမှာ စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးအရာလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ဘာသာသိနေသလိုမျိုး ကျွန်ုပ်တုိ့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ အဖျက်အမှောက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ နှစ်စဉ်လျင်မြန်စွာရှင်သန်ကြီးထွားလာနေကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပန်းခြံထဲမှာ၊ လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ၊ အိမ်ရှေ့အဝင်လမ်းတွေပေါ်က အုတ်ကြားတွေထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် မြက်ခင်းပြင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဒီဒုက္ခပေးတဲ့အပင်လေးတွေကို ဖယ်ပစ်ဖို့လိုနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကိုကယ်တင်နိုင်မယ့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိပါတယ်။သင့်ဆီမှာ ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေကရှိနေပြီးသားပါ။ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး ဒီနှစ်နွေမှာ သင့်ရဲ့ပန်းခြံထဲမှာစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီနည်းလေးက အရမ်းကိုရိုးရှင်းပြီးတော့ သင်လည်းပိုက်ဆံတစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေနွေးပူပူနဲ့ထိမိတဲ့ အပင်တိုင်းဟာ သေကုန်ပါလိမ့်မယ်။ လျှောက်လမ်းနဲ့ အိမ်ရှေ့အဝင်လမ်းက အုတ်ကြားတွေထဲကိုရေနွေးပူလောင်းချပေးခြင်းဟာ ပေါင်းပင်တွေကိုသေစေပါလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုလိုချင်ရင်တော့ ရေနွေးထဲဆားနည်းနည်းခပ်ပေးပါ။ ဒီနည်းက ကျဉ်းတဲ့နေရာတွေမှာသာ အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့မြက်ခင်းတစ်ခုလုံးပေါ်တော့ ရေနွေးတွေမလောင်းချမိပါစေနဲ့။
ဒီနည်းကတော့ ပန်းခြံထဲကပေါင်းတွေကိုသတ်ဖို့ ကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံး ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ ပိုကောင်းတာက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက သင့်အိမ်ထဲမှာရှိပြီးသားပါ။ ပုံမှန်ဆိုဒ် ရေဖြန်းပုလင်း (spray bottle) ထဲမှာ ဆားကို ခွက်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံစာနဲ့ ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာရည်တစ်ညှစ်စာထည့်ပြီး ရှာလကာရည်တွေဖြည့်လိုက်ပါ။ သင့်မှာရေဖြန်းပုလင်း (spray bottle) မရှိဘူးဆိုရင် စတိုးဆိုင်လေးတွေမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်မှာရှိတဲ့ မှန်ကြည်ဆေးရည်ဗူးကုန်သွားတဲ့အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်။
(၃) စစ်ထရစ်အက်ဆစ် နဲ့ သံပုရာရည်
သင်က အော်ဂဲနစ်ပေါင်းသတ်ဆေးကို ရှာနေတာဆိုရင်တော့ စစ်ထရစ်အက်ဆစ်က အသင့်တော်ဆုံးပေါင်းသတ်ဆေးပါပဲ။ ပုံမှန်ပေါင်းသတ်ဆေးတွေမှာဆိုရင်လည်း စစ်ထရစ်အက်ဆစ်ဟာ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲက မလိုအပ်တဲ့ပေါင်းမြတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ အလုပ်ဖြစ်ပြီဆိုတာသင်သိနေလောက်ပါပြီ။ စတိုးဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ စစ်ထရစ်အက်ဆစ်ကို သံပုရာရည် (၄) အောင်စ၊ ရှာလကာရည်အဖြူ သို့မဟုတ် ပန်းသီးကထုတ်တဲ့ ရှာလကာရည် ပုလင်းအဖုံး (၁) ဖုံးစာနဲ့ရောပြီး ပုံမှန်ဆိုဒ် ရေဖြန်းပုလင်းထဲမှာ ထည့်ပါ။ ပုလင်းကို နာနာလှုပ်ပြီး မလိုအပ်တဲ့ အပင်တွေပေါ်မှာ ဖြန်းပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကြောင်အိမ်တွေထဲမှာရှိလေ့ရှိတဲ့ ဆားပုလင်းလေးတွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ နွေဦးရာသီပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင် ဆားကိုသင့်ဥယျာဉ်ရဲ့အစွန်းလေးတွေမှာ စည်းတားသလို ဖြူးထားလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာက သင့်မြက်ရိတ်စက်မမီနိုင်တဲ့ အစွန်အဖျားနေရာလေးတွေမှာ ပေါင်းမြက်တွေပေါက်လာခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဆားက လူတွေကိုရေဓာတ်ခန်းခြောက်အောင်လုပ်နိုင်သလိုပဲ အပင်တွေကိုလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ အပင်တွေကို ခြောက်ပြီးသေသွားစေပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ ရေဓာတ်ပိုခန်းခြောက်လွယ်အောင် ဒီနည်းလမ်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
ပေါင်းမြက်ပင်တွေဟာလည်း တခြားအပင်တွေလိုပဲ ရှင်သန်ဖို့ ရေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ရေမှာ ဓာတ်ပြယ် pH level တစ်ခုရှိပါတယ်၊ အက်ဆစ်ဘက်လည်းမဖောက် အယ်ကာလိုင်းဘက်လည်းမရောက်ပဲ ကြားမှာရှိနေတာကိုဆိုလိုတာပါ။ ရှာလကာရည်ကတော့ အက်ဆစ်ဘက်ကိုအတော်လေးဖောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှာလကာရည်အဖြူ သို့မဟုတ် ပန်းသီးကထုတ်တဲ့ ရှာလကာရည်ကို ပေါင်းပင်တွေပေါ်ကို လောင်းပေးမယ်ဆို ပေါင်းပင်တွေအမြန်သေကုန်မှာပါ။ ပိုမြန်မြန်သေစေချင်ရင် ပူပြီးနေသာတဲ့နေ့မှာ ပေါင်းပင်တွေပေါ်ကို ရှာလကာရည်ဖြန်းပေးပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ပန်းအလှပင်လေးတွေပေါ်ကို မဖြန်းမိဖို့တော့ ဂရုစိုက်ပါ။ သတိထားရမှာက သင်အရမ်းအများကြီး ဖြန်းမိရင်တော့ သင့်မြေကြီးရဲ့ pH level ကို လျော့စေနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်၊ မြက်ခင်းတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
လူအများစုက သူတို့ရဲ့ဟင်းလျာတွေပေါ်မှာ အရသာပိုထူးအောင် ငရုတ်သီးမှုန့်နည်းနည်းဖြူးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ငရုတ်သီးမှုန့် တစ်ဇွန်းမောက်မောက်ကြီးထည့်လိုက်တယ်လို့တွေးကြည့်၊ တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် မခံနိုင်လောက်အောင်စပ်တယ်ဟုတ်? ဆပ်ပြာရည်ရယ်၊ ရေရယ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်တချို့ရယ်ကို ရေဖြန်းပုလင်းထဲထည့်စပ်ပြီး ပေါင်းပင်တွေ အပြုံလိုက်ပေါက်နေတဲ့နေရာတွေမှာ လိုက်ဖြန်းပေးပါ။ ဒီအရည်ကို သင် ပေါင်းမြက်တွေမပေါက်စေချင်တဲ့ နေရာတွေမှာလိုက်ဖြန်းထားတာတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
(၇) သတင်းစာများ သို့မဟုတ် အပင်ခံစိုက်တဲ့ ဥယျာဉ်သုံးပိတ်စ
သင့်မှာ ဥယျာဉ်သုံးပိတ်စ အလွယ်တကူမရှိဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ပေါင်းမြက်တွေကို သတင်းစာတွေနဲ့ အုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။ ကြွေသားမပါတဲ့ ရိုးရိုးသတင်းစာတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနည်းက အချိန်တော့နည်းနည်းယူရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က သင့်ဥယျာဉ်ထဲမှာ အချိန်ကုန်ရတာကိုကြိုက်သူ၊ ပေါင်းမြက်ကင်းစင်တဲ့ ခြံပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှစ်သက်သူဆိုရင်တော့ ဒီနည်းကသင့်တော်ပါတယ်။
ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ပေါင်းပင်တွေရှင်သန်ဖို့ ရေနဲ့နေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်သာသူတို့ကို သတင်းစာတွေနဲ့ အုပ်ထားမယ်ဆိုရင် သူတို့ဆက်လက်မရှင်သန်နိုင်ပဲ နောက်ဆုံးမှာ သေသွားပါလိမ့်မယ်။ သတင်းစာတွေ မြေကြီးမှာကပ်နေအောင်ထိန်းထားဖို့ အပေါ်က ကျောက်ခဲတွေနဲ့ဖိထားတာ ဒါမှမဟုတ် မြေဆွေးတွေ ခပ်ထူထူလေးပုံထားတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းစာတွေက အဖျက်ပိုးတွေမလာနိုင်အောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
သင့်ဥယျာဉ်ထဲမှာ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေးကဲ့သို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓာတုဆေးတွေ မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် မြေကြီးပေါ်မှာ မြေဆွေးခပ်ထူထူလေးပုံထားပေးပါ။ မြေဆွေးက ပေါင်းပင်တွေပေါက်၊ပွားနှုန်းကို လျှော့ချပေးပြီး မြေကြီးကိုနေရောင်တိုက်ရိုက်ထိုးတာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သင့်ဥယျာဉ်ထဲမှာ ပေါင်းမြက်ပင်တွေကိုထိန်းသိမ်းရင်း အချိန်တွေကုန်နေတာကို ငြီးငွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ ပေါင်းပင်တွေကို ဆွဲနှုတ်ပြီး သင်ကြိုက်တဲ့ပန်းပင်တွေကို စိုက်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပန်းခြံထဲမှာဆိုရင် မြေကြီးအတိုင်းပဲရှိနေစေချင်တဲ့ နေရာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲ့လိုနေရာလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ပန်းခြံနဲ့ မြက်ခင်းထဲကတချို့နေရာလေးတွေမှာ ထပ်တစ်ရာပန်းလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားအကြမ်းခံတဲ့အပင်လေးတွေစိုက်ထားမှ ကြည့်ကောင်းမှာပါ။
အပေါ်က နည်းလမ်းတွေနဲ့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်မြက်ခင်းကိုပုံမှန်ရိတ်ပေးရင်းနဲ့ ပေါင်းပင်တွေကို ဖြတ်ပစ်ပါ။ ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့မြက်ရိတ်စက်အသွားကို ပိုမြင့်တဲ့ setting မှာထားပြီးရိတ်ရင် မြက်တွေရဲ့အရှည်ကဒီအတိုင်းကျန်ပြီးတော့ ပေါင်းပင်တွေကိုတော့ဖြတ်သွားမှာပါ။ သင့်မြက်ခင်းကို သင်မကြာခဏရိတ်လေ ပေါင်းပင်ကြီးထွားနှုန်းနှေးလေဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ပေါင်းပင်လေးတွေသေသွားမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီအတိုင်းလည်းဆွဲနှုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ကလေးတွေကိုတစ်ပတ်၂ကြိမ် နှုတ်ခိုင်းပါတယ်။ သူတို့ကို ဒါဟာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ သူတို့မလုပ်ချင်ကြတဲ့အခါ ဒါဟာအိမ်အပြင်ဥယျာဉ်ထဲမှာ စိတ်အပန်းဖြေနည်းတစ်ခုအဖြစ်တွေးပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါတယ်။
ပေါင်းပင်တွေက အမြင်သာမလှပေမယ့် တချို့အပင်တွေကတော့ စားလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ: ထိကရုံး၊ ပုစွန်စာ၊ ကင်းပုံ နဲ့ မြင်းခွာရွက်တွေဟာ အသုပ်ထဲလည်းထည့်စားလို့ရပါတယ်။ သင်ပေါင်းမြက်ပင်တွေကို မစားခင်မှာ သူတို့မှာအဆိပ်ရှိမရှိကို အထပ်ထပ်အခါခါစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
သသေခြောခြာပေါငျးနှုတျရိတျသငျထားတဲ့ မွကျခငျးလေးနဲ့ ပနျးခွံလေးကိုရရှိနိုငျဖို့ ကြှနျုပျတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ တိုးတိုးတိတျတိတျဖွရှေငျးနရေတာတှရှေိပါတယျ။ ဒါဟာလှယျကူတဲ့အလုပျတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့လညျး လူတှဟောသူတို့ရဲ့မွကျခငျးပွငျလေးကို ထိနျးသိမျးဖို့ နှဈစဉျပေါငျးသတျသမားတှငှေားရမျးခွငျး၊ အန်တရာယျရှိတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှကေိုဝယျယူခွငျးတှမှော သနျးပေါငျးမြားစှာထိကုနျကပြါတယျ။
ဒီအသုံးမတညျ့တဲ့ အပငျတှဟော နှရောသီမှာ စိတျပကျြစရာအကောငျးဆုံးအရာလေးတှဖွေဈတယျဆိုတာ သူတို့ဘာသာသိနသေလိုမြိုး ကြှနျုပျတုိ့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝထဲမှာ အဖကျြအမှောကျလုပျငနျးတှကေိုလုပျနိုငျဖို့ နှဈစဉျလငျြမွနျစှာရှငျသနျကွီးထှားလာနကွေပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ပနျးခွံထဲမှာ၊ လြှောကျလမျးပျေါမှာ၊ အိမျရှအေ့ဝငျလမျးတှပေျေါက အုတျကွားတှထေဲမှာ ဒါမှမဟုတျ မွကျခငျးပွငျထဲမှာရှိနတေဲ့ ဒီဒုက်ခပေးတဲ့အပငျလေးတှကေို ဖယျပဈဖို့လိုနပွေီဆိုရငျတော့ သငျ့ကိုကယျတငျနိုငျမယျ့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ နညျးလမျးလေးတှေ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာရှိပါတယျ။သငျ့ဆီမှာ ဒီပါဝငျပစ်စညျးတှကေရှိနပွေီးသားပါ။ အောကျပါနညျးလမျးတှထေဲက တဈခုကိုရှေးခယျြပွီး ဒီနှဈနှမှော သငျ့ရဲ့ပနျးခွံထဲမှာစမျးကွညျ့လိုကျပါ။
ဒီနညျးလေးက အရမျးကိုရိုးရှငျးပွီးတော့ သငျလညျးပိုကျဆံတဈပွားတဈခပျြမှ ကုနျမှာမဟုတျပါဘူး။ ရနှေေးပူပူနဲ့ထိမိတဲ့ အပငျတိုငျးဟာ သကေုနျပါလိမျ့မယျ။ လြှောကျလမျးနဲ့ အိမျရှအေ့ဝငျလမျးက အုတျကွားတှထေဲကိုရနှေေးပူလောငျးခပြေးခွငျးဟာ ပေါငျးပငျတှကေိုသစေပေါလိမျ့မယျ။ ပိုကောငျးတဲ့ရလဒျကိုလိုခငျြရငျတော့ ရနှေေးထဲဆားနညျးနညျးခပျပေးပါ။ ဒီနညျးက ကဉျြးတဲ့နရောတှမှောသာ အလုပျဖွဈတာကွောငျ့ သငျ့ရဲ့မွကျခငျးတဈခုလုံးပျေါတော့ ရနှေေးတှမေလောငျးခမြိပါစနေဲ့။
ဒီနညျးကတော့ ပနျးခွံထဲကပေါငျးတှကေိုသတျဖို့ ကြှနျုပျအနှဈသကျဆုံး ကိုယျတိုငျလုပျလို့ရတဲ့နညျးလမျးလေးပါ။ ပိုကောငျးတာက ပါဝငျပစ်စညျးတှကေ သငျ့အိမျထဲမှာရှိပွီးသားပါ။ ပုံမှနျဆိုဒျ ရဖွေနျးပုလငျး(spray bottle)ထဲမှာ ဆားကို ခှကျရဲ့လေးပုံတဈပုံစာနဲ့ ပနျးကနျဆေးဆပျပွာရညျတဈညှဈစာထညျ့ပွီး ရှာလကာရညျတှဖွေညျ့လိုကျပါ။ သငျ့မှာရဖွေနျးပုလငျး(spray bottle)မရှိဘူးဆိုရငျ စတိုးဆိုငျလေးတှမှောအလှယျတကူဝယျလို့ရပါတယျ၊ ဒါမှမဟုတျသငျ့မှာရှိတဲ့ မှနျကွညျဆေးရညျဗူးကုနျသှားတဲ့အခါ သုံးနိုငျပါတယျ။
(၃) စဈထရဈအကျဆဈ နဲ့ သံပုရာရညျ
သငျက အျောဂဲနဈပေါငျးသတျဆေးကို ရှာနတောဆိုရငျတော့ စဈထရဈအကျဆဈက အသငျ့တျောဆုံးပေါငျးသတျဆေးပါပဲ။ ပုံမှနျပေါငျးသတျဆေးတှမှောဆိုရငျလညျး စဈထရဈအကျဆဈဟာ ပါဝငျပစ်စညျးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဒီလောကျဆို သငျ့ရဲ့ဥယြာဉျထဲက မလိုအပျတဲ့ပေါငျးမွတျတှကေိုဖယျရှားဖို့ အလုပျဖွဈပွီဆိုတာသငျသိနလေောကျပါပွီ။ စတိုးဆိုငျတှမှောရောငျးတဲ့ စဈထရဈအကျဆဈကို သံပုရာရညျ (၄)အောငျစ၊ ရှာလကာရညျအဖွူ သို့မဟုတျ ပနျးသီးကထုတျတဲ့ ရှာလကာရညျ ပုလငျးအဖုံး(၁)ဖုံးစာနဲ့ရောပွီး ပုံမှနျဆိုဒျ ရဖွေနျးပုလငျးထဲမှာ ထညျ့ပါ။ ပုလငျးကို နာနာလှုပျပွီး မလိုအပျတဲ့ အပငျတှပေျေါမှာ ဖွနျးပေးပါ။
ကြှနျုပျတို့ရဲ့ ကွောငျအိမျတှထေဲမှာရှိလရှေိ့တဲ့ ဆားပုလငျးလေးတှကေို ကောငျးကောငျးအသုံးခဖြို့ အခြိနျတနျပါပွီ။ နှဦေးရာသီပဲရှိသေးတယျဆိုရငျ ဆားကိုသငျ့ဥယြာဉျရဲ့အစှနျးလေးတှမှော စညျးတားသလို ဖွူးထားလို့ရပါတယျ။ ဒီလိုလုပျပေးတာက သငျ့မွကျရိတျစကျမမီနိုငျတဲ့ အစှနျအဖြားနရောလေးတှမှော ပေါငျးမွကျတှပေေါကျလာခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။ ဆားက လူတှကေိုရဓောတျခနျးခွောကျအောငျလုပျနိုငျသလိုပဲ အပငျတှကေိုလညျးလုပျနိုငျပါတယျ၊ အပငျတှကေို ခွောကျပွီးသသှေားစပေါတယျ။ ပူပွငျးတဲ့နှရောသီမှာ ရဓောတျပိုခနျးခွောကျလှယျအောငျ ဒီနညျးလမျးကို သုံးနိုငျပါတယျ။
ပေါငျးမွကျပငျတှဟောလညျး တခွားအပငျတှလေိုပဲ ရှငျသနျဖို့ ရကေိုလိုအပျပါတယျ။ ရမှော ဓာတျပွယျ pH levelတဈခုရှိပါတယျ၊ အကျဆဈဘကျလညျးမဖောကျ အယျကာလိုငျးဘကျလညျးမရောကျပဲ ကွားမှာရှိနတောကိုဆိုလိုတာပါ။ ရှာလကာရညျကတော့ အကျဆဈဘကျကိုအတျောလေးဖောကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရှာလကာရညျအဖွူ သို့မဟုတျ ပနျးသီးကထုတျတဲ့ ရှာလကာရညျကို ပေါငျးပငျတှပေျေါကို လောငျးပေးမယျဆို ပေါငျးပငျတှအေမွနျသကေုနျမှာပါ။ ပိုမွနျမွနျသစေခေငျြရငျ ပူပွီးနသောတဲ့နမှေ့ာ ပေါငျးပငျတှပေျေါကို ရှာလကာရညျဖွနျးပေးပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ပနျးအလှပငျလေးတှပေျေါကို မဖွနျးမိဖို့တော့ ဂရုစိုကျပါ။ သတိထားရမှာက သငျအရမျးအမြားကွီး ဖွနျးမိရငျတော့ သငျ့မွကွေီးရဲ့ pH levelကို လြော့စနေိုငျပွီး သငျ့ရဲ့ဥယြာဉျ၊ မွကျခငျးတှကေို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
လူအမြားစုက သူတို့ရဲ့ဟငျးလြာတှပေျေါမှာ အရသာပိုထူးအောငျ ငရုတျသီးမှုနျ့နညျးနညျးဖွူးလရှေိ့ကွပါတယျ။ ငရုတျသီးမှုနျ့ တဈဇှနျးမောကျမောကျကွီးထညျ့လိုကျတယျလို့တှေးကွညျ့၊ တှေးကွညျ့ရုံနဲ့တငျ မခံနိုငျလောကျအောငျစပျတယျဟုတျ? ဆပျပွာရညျရယျ၊ ရရေယျ၊ ငရုတျသီးမှုနျ့တခြို့ရယျကို ရဖွေနျးပုလငျးထဲထညျ့စပျပွီး ပေါငျးပငျတှေ အပွုံလိုကျပေါကျနတေဲ့နရောတှမှော လိုကျဖွနျးပေးပါ။ ဒီအရညျကို သငျ ပေါငျးမွကျတှမေပေါကျစခေငျြတဲ့ နရောတှမှောလိုကျဖွနျးထားတာတော့ အကောငျးဆုံးပါ။
(၇) သတငျးစာမြား သို့မဟုတျ အပငျခံစိုကျတဲ့ ဥယြာဉျသုံးပိတျစ
သငျ့မှာ ဥယြာဉျသုံးပိတျစ အလှယျတကူမရှိဘူးဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ပေါငျးမွကျတှကေို သတငျးစာတှနေဲ့ အုပျထားလို့လညျးရပါတယျ။ ကွှသေားမပါတဲ့ ရိုးရိုးသတငျးစာတှဖွေဈဖို့လိုပါတယျ။ ဒီနညျးက အခြိနျတော့နညျးနညျးယူရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့သငျက သငျ့ဥယြာဉျထဲမှာ အခြိနျကုနျရတာကိုကွိုကျသူ၊ ပေါငျးမွကျကငျးစငျတဲ့ ခွံပတျဝနျးကငျြကိုနှဈသကျသူဆိုရငျတော့ ဒီနညျးကသငျ့တျောပါတယျ။ ရှမှေ့ာပွောခဲ့သလိုပဲ၊ ပေါငျးပငျတှရှေငျသနျဖို့ ရနေဲ့နေ လိုအပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျသာသူတို့ကို သတငျးစာတှနေဲ့ အုပျထားမယျဆိုရငျ သူတို့ဆကျလကျမရှငျသနျနိုငျပဲ နောကျဆုံးမှာ သသှေားပါလိမျ့မယျ။ သတငျးစာတှေ မွကွေီးမှာကပျနအေောငျထိနျးထားဖို့ အပျေါက ကြောကျခဲတှနေဲ့ဖိထားတာ ဒါမှမဟုတျ မွဆှေေးတှေ ခပျထူထူလေးပုံထားတာတှေ လုပျနိုငျပါတယျ။ သတငျးစာတှကေ အဖကျြပိုးတှမေလာနိုငျအောငျလညျးလုပျပေးနိုငျပါသေးတယျ။
သငျ့ဥယြာဉျထဲမှာ ပိုးသတျဆေး၊ ပေါငျးသတျဆေးကဲ့သို့ အန်တရာယျရှိတဲ့ဓာတုဆေးတှေ မသုံးခငျြဘူးဆိုရငျ မွကွေီးပျေါမှာ မွဆှေေးခပျထူထူလေးပုံထားပေးပါ။ မွဆှေေးက ပေါငျးပငျတှပေေါကျ၊ပှားနှုနျးကို လြှော့ခပြေးပွီး မွကွေီးကိုနရေောငျတိုကျရိုကျထိုးတာကိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
သငျ့ဥယြာဉျထဲမှာ ပေါငျးမွကျပငျတှကေိုထိနျးသိမျးရငျး အခြိနျတှကေုနျနတောကို ငွီးငှလေ့ာပွီဆိုရငျတော့ ပေါငျးပငျတှကေို ဆှဲနှုတျပွီး သငျကွိုကျတဲ့ပနျးပငျတှကေို စိုကျလိုကျပါ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ပနျးခွံထဲမှာဆိုရငျ မွကွေီးအတိုငျးပဲရှိနစေခေငျြတဲ့ နရောတှရှေိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အဲ့လိုနရောလေးတှကေို ထိနျးသိမျးဖို့ အခြိနျကိုစီမံခနျ့ခှဲရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ပနျးခွံနဲ့ မွကျခငျးထဲကတခြို့နရောလေးတှမှော ထပျတဈရာပနျးလေးတှေ ဒါမှမဟုတျ တခွားအကွမျးခံတဲ့အပငျလေးတှစေိုကျထားမှ ကွညျ့ကောငျးမှာပါ။
အပျေါက နညျးလမျးတှနေဲ့ အလုပျမဖွဈဘူးဆိုရငျတော့ သငျ့မွကျခငျးကိုပုံမှနျရိတျပေးရငျးနဲ့ ပေါငျးပငျတှကေို ဖွတျပဈပါ။ ဘယျလိုဖွတျရမလဲဆိုတော့ သငျ့ရဲ့မွကျရိတျစကျအသှားကို ပိုမွငျ့တဲ့settingမှာထားပွီးရိတျရငျ မွကျတှရေဲ့အရှညျကဒီအတိုငျးကနျြပွီးတော့ ပေါငျးပငျတှကေိုတော့ဖွတျသှားမှာပါ။ သငျ့မွကျခငျးကို သငျမကွာခဏရိတျလေ ပေါငျးပငျကွီးထှားနှုနျးနှေးလဖွေဈပွီး နောကျဆုံးမှာတော့ ပေါငျးပငျလေးတှသေသှေားမှာပါ။ ဒါမှမဟုတျ ဒီအတိုငျးလညျးဆှဲနှုတျနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ ကြှနျတေျာ့ကလေးတှကေိုတဈပတျ၂ကွိမျ နှုတျခိုငျးပါတယျ။ သူတို့ကို ဒါဟာကိုယျလကျလှုပျရှားနညျးတဈမြိုးဖွဈကွောငျးပွောပွပါတယျ။ သူတို့မလုပျခငျြကွတဲ့အခါ ဒါဟာအိမျအပွငျဥယြာဉျထဲမှာ စိတျအပနျးဖွနေညျးတဈခုအဖွဈတှေးပွီး ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလုပျပါတယျ။
ပေါငျးပငျတှကေ အမွငျသာမလှပမေယျ့ တခြို့အပငျတှကေတော့ စားလို့ရပါတယျ။ ဥပမာ: ထိကရုံး၊ ပုစှနျစာ၊ ကငျးပုံ နဲ့ မွငျးခှာရှကျတှဟော အသုပျထဲလညျးထညျ့စားလို့ရပါတယျ။ သငျပေါငျးမွကျပငျတှကေို မစားခငျမှာ သူတို့မှာအဆိပျရှိမရှိကို အထပျထပျအခါခါစဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
12.5 x 55 ပေ အကယျြ တိုကျခနျးရောငျးမညျ
လမ်း (၄၀)၊ အလယ် ဘလောက် အနော်ရထာနှင့်...
2 ခန်း မပါ
၁၉'×၅၄'ပေဒုတိယထပျ ၄၀၀ သာကတေ ထူပါရုံလမျးသှယျ...
တောင်ဥက္ကလာပ တိုက်ခန်းသစ် ဌားရန်